ဒိုးမယ် - Page4of 38 - နေရာသစ်များကို ရှာဖွေကြပါစို့!
လှည်းတန်းက BBQ နဲ့ Hotpot ရောင်းတဲ့ Budget ဆိုင်လေး
စျေးတန်တဲ့ BBQ နဲ့ Hotpot ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်လောက် တွေ့ထားတယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားလား? မုန်ညင်း+ ကန်စွန်းရွက်+ ကြက်ဥ+ ပြောင်းဖူး+ ကြက်သား set ကို 1800 ဆိုရင် ပိုစိတ်ဝင်စားလာပြီလား? ဒီဆိုင်လေးက ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ လူစည်ကားတဲ့ လှည်းတန်းမှာပါနော်..။ ...
တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ အနောက်တိုင်းအစားအစာတွေနဲ့ ဗိုက်ဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင် တိုင်းရင်းသားအစားအစာလေးတွေလည်း လှည့်ကြည့်ကြပါဦး။ ဒီတစ်ခါအလှည့်ကျတာကတော့ နာမည်ကြီးတဲ့ ရှမ်းအစားအစာတချို့ပေါ့.. ထူးထူးဆန်းဆန်း လူနေမှုဓလေ့နဲ့ အင်းလေးကိုပဲ သွားမလား၊ ရာသီဥတုအေးတဲ့ ကလောနဲ့ တောင်ကြီးကိုပဲ သွားမလား။ ရန်ကုန်မှာပဲ လျှောက်ပတ်စားမလား။ ကဲ ဘယ်ပဲသွားသွား...
Admin အကြိုက်နဲ့ကိုက်တဲ့ Bubble Tea ဆိုင် (၄) ဆိုင်
Bubble tea ဆိုင်ရှေ့ရောက်တာနဲ့ ခြေထောက်ကရွှေ့မရတော့ဘူးလား? ဆိုင်အသစ်ဖွင့်တယ်ဆိုပြီး ပြေးသောက်ကြည့်ပေမဲ့ တချို့ကျတော့ ကိုယ်နဲ့ကီးမကိုက်တာတွေလည်း ရှိတတ်ပြန်ရောနော်။ အဲ့တော့ အခုနောက်ပိုင်း ကိုယ်သဘောကျတဲ့ဆိုင်လေးတွေကို ပြောပြပေးမယ်.. အကြိုက်တူလား မတူလား ကြည့်ကြည့်တာပေါ့။ ဒီတစ်ခါကတော့ Bubble Tea ဆိုင်အကြောင်းလေးတွေ အပြန်အလှန်...
အလာ့ဂျစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ မပေါ့ဆသင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုနော်.. အထူးသဖြင့် နေ့တိုင်းစားသောက်နေရတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုပါသွားရုံလေးနဲ့တင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်တတ်တာမို့လို့ ဒီတစ်ခါမှာတော့ အစားအသောက်နဲ့ အလာ့ဂျစ်အကြောင်းကို ဒိုးမယ်က ရေးပေးထားတယ်..။ အစားအသောက်အကြောင်းတွေ တင်ပေးရင်းနဲ့ ကြားဖြတ် ကျန်းမာရေးအကြောင်းလေးလည်း တင်ပေးချင်လို့နော်.. ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ကိုယ်သတိမထားလိုက်မိတဲ့အရာလေးတစ်ခုကနေ...
လူကြိုက်များနေတဲ့ Samyang ရဲ့ ထုတ်ကုန်အချို့
ရှိသလားဟေ့.. ကိုယ်တွေလို ခေါက်ဆွဲပဲ ခဏခဏပြုတ်စားနေလို့ အော်ခံထိနေတဲ့အချောလေးတွေ အလဲ့ 😂 Samyang ဆိုတဲ့ အသင့်စား ခေါက်ဆွဲတံဆိပ်ကို မကြားဖူးတဲ့လူ တော်တော်ရှားမယ်ထင်တာပဲ။ အဲ့ရှားရှားပါးပါးလေးတွေအတွက် ဒိုးမယ်က အညွှန်းလေးရေးပေးထားတယ်။ မစားခင် ဖတ်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ >> အရင်ဆုံး ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမပြောခင် တရုတ်ကတစ်ပုံစံတည်း...
မီးဖိုချောင်ကို ပျော်ပျော်ပါးပါး သန့်ရှင်းကြမယ်
ဒိုးမယ်ကိုအမြဲ အားပေးနေကြတဲ့သူများအတွက် မီးဖိုချောင်ကို မပျင်းမရိ ဘယ်လို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြံညဏ်လေးပေးချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ မြူးမြူးကြွကြွသီချင်းလေးကို ဖွင့်ပေးပါ ။ သီချင်း မြူးမြူးလေးက စိတ်ကို လဲလန်းဆန်းသလို မြူးမြူးကြွကြွနဲ့အလုပ် အမြန်ပြီးနိုင်ပါတယ်။ ညစ်ပေနေတဲ့နေရာတွေကို ချေးချွတ်ဖို့အတွက် Dettol ဆပ်ပြာတဗူးကိုဝယ်ပါ အဝတ်စုတ်တခုကိုယူပါ ပြီးလျင်လက်အိတ်စွပ်ပြီး...